ရွှေမျက်နှာ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ ရွှေမျက်နှာ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
Anti Aging Cleaners
Anti Aging ကုန်ပစ္စည်း
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ ရွှေမျက်နှာ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံစံ - 6-2
ထူးခြားသောနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်,ကော်လာဂျင်၏အသားအရေကိုအလွယ်တကူစိုစွတ်စေရန်အဖိုးတန်ရွှေသတ္တုပါးနှင့်ခိုင်မာသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပေါင်းခြင်း,မျက်နှာဖုံးတစ်ခုစာရွက်အပေါငျးတို့သအနှစ်သာရ condenses!အသားအရေအပြည့်အဝအာဟာရများကိုစုပ်ယူပါစေ,ချောမွေ့အောင်မြင်,အတိမ်,Whitening နှင့်သက်ရောက်မှုခိုင်မာစေ.
လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း,မျက်နှာ၏အရေပြားအပူရှိန်သည်ရွှေမျက်နှာဖုံးတွင်အနှစ်သာရကိုထုတ်လွှတ်ရန်နှင့်စုပ်ယူရန်အားပေးသည်.ရွှေမျက်နှာဖုံးသည်တဖြည်းဖြည်းပါးလာသည်မှာထင်ရှားသည်.၎င်းသည်မျက်နှာဖုံးဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုအပြည့်အ ၀ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်.
ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ
မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက်,မျက်နှာဖုံးကိုအသားအရေနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေပါ.45 ပြီးနောက်-မိနစ် ၆၀,အရေပြားခိုင်မာတဲ့ခံစားရသောအခါ,မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားပြီးညင်သာစွာကျန်ရှိနေသေးသောအနှစ်သာရကိုစုပ်ယူ.
လျှောက်လွှာပြီးနောက်,150c ယူပါ.ဂ(တစ်ခါသုံးခွက်တစ်ခွက်လောက်)96 ဒီဂရီအထက်ရေပူ၏,ပျော်ဝင်သွားစေရန်ရွှေမျက်နှာဖုံးကို ထား၍ အအေးခံပါ,၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်အနှစ်သာရအဖြစ်သုံးပါသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အတွက်ရေချိုးကန်ထဲသို့ထည့်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/gold-facial.html
သို့: NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD.
ကိုနမူနာ အတွက်သတ်မှတ်ချက်များ: ကျေးဇူးပြု. ရွေးပါ ဈေးဝယ်သင်္ဘောများနှင့်နမူနာအခကြေးငွေနှစ်မျိုးစလုံးငွေပေးချေ
အကောင်းဆုံး ရွှေမျက်နှာ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် ရွှေမျက်နှာ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
VSK တဆေး Moisturizing မျက်နှာဖုံး အလင်း,ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောပစ္စည်း,မျက်နှာလျှောက်ထား၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်,မျက်နှာသည်အာဟာရဓာတ်ကိုစုပ်ယူပြီးဖြည့်စွက်ရန်လွယ်ကူသည်,တောက်ပချောမွေ့သောအသားအရေအသက်အရွယ်Maintenance အာရုံစူးစိုက်ပိုးထည်၏အကူအညီဖြင့်,အသားအရေကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုအလွယ်တကူမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်,အရေပြားခြောက်သွေ့စေရန်,အသားအရေအစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပါစေ,နှင့်အရေပြား elasticity နှင့်တောက်ပထိန်းသိမ်းရန်. ကို Maintenance အကြံပေးချက်များမျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက်,ပိုးမျက်နှာဖုံးပေါ်ထွက်လာ,ပုလဲစက္ကူဖြူကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ.အလယ်ပိုးပိုးမျက်နှာဖုံးပြီးနောက်အသားအရေကိုလုံးဝတွဲဖြစ်ပါတယ်,အပြင်ဘက်အပြာကျောထောက်နောက်ခံစက္ကူကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်.၁၅ ယောက်ကိုစောင့်ပါ-မိနစ် 20.မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ.စုပ်ယူသည်အထိကျန်ရှိနေသေးသောအနှစ်သာရ Pat. (ပိုကောင်းသောရလဒ်များအတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်)စွမ်းရည်:၇ ပိုင်း/သတျတောမူလ:ထိုင်ဝမ်
လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်ယူမှုဝါး တရုတ်လက်ဖက်ရည်ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်!ယခင်တုန်းက,အရှေ့ယဉ်ကျေးမှု၌တည်၏,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုသုံးပြီးအစာစားပြီးနောက်သုံးဆောင်ပြီးနောက်ရေငတ်ပြေစေခြင်းနှင့်နှုတ်၏အမွှေးရနံ့ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလေ့အထရှိခဲ့သည်.ဒီယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာကိုအာရုံစူးစိုက်,10 ကျော်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၏ပြီးနောက်,အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဂျပန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ.ရှေးခေတ်ကကတည်းက,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနှင့်ဖျန်းသောက်ခြင်းကိုယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းသည်သွားဘက်ဆိုင်ရာတားဆီးသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်.တစ်ချိန်ကဒေါ်စုကလက်ဖက်ရည်ကြမ်းနှင့်သွားကိုသန်စွမ်းစေသည့်နည်းလမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်.အဆိုပါနည်းလမ်းမှာအလွန်ပြင်းထန်သောလက်ဖက်ရည်ကိုချက်လုပ်ရန်နှင့်ချောကျိကျိအရသာကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်သရက်ရွက်နှင့်အစာအိမ်ကိုမထိခိုက်စေရန်အစာစားပြီးလျှင်ပါးစပ်ကိုဆေးကြောရန်ဖြစ်သည်။.လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်ယူသည့်ခံတွင်းဆေးရည်သည်သဘာဝအပင်တစ်ပင်ဖြစ်သည်-အခြေခံ,အရာခံတွင်းလိုင်ထဲမှာဘက်တီးရီးယား၏ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်,စီးကရက်နှင့်အရက်ကဲ့သို့သောပါးစပ်အနံ့များကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်သည်.သဘာဝအတိုင်းသန့်စင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်,အတုအရသာနှင့်ဓာတုအမွှေးအကြိုင်လုံးဝမထည့်သွင်းထားပါ.သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလန်းဆန်းစေသောအရသာသည်သံပုရာနှင့်ပူစီနံမှဖြစ်သည်.အသုံးပြုပြီးနောက်,ကပြင်းထန်သောယားယံမရှိပါ,ဓာတုပါဝင်ပစ္စည်းများ,နှင့်စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်ပါးစပ်ဆေးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ,အသုံးပြုသောအခါစိတ်ငြိမ်သက်မှုသေချာ,စင်ကြယ်စေလိမ့်မည်,မိသားစုဝင်တိုင်းအားလန်းဆန်းကျန်းမာစေပါသည်,ဆေးလိပ်သောက်,နှင့်ပါးစပ်အနံ့.ကုန်ပစ္စည်းဆွဲဆောင်မှုအာရုံစိုက် လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်ယူမှုသည်ပါးစပ်အတွင်းရှိအနံ့များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးအသက်ရှုလတ်ဆတ်။ သာယာကြည်နူးစေသည်.၎င်းကိုရေနှင့်ရော။ မသုံးစွဲဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်. ပါးစပ်အတွင်းရှိအညစ်အကြေးများကိုပိုလီမာဆေးထုတ်ပြီးပါးစပ်သန့်ရှင်းစေရန်အလွယ်တကူဆေးကြောပါ. ပါးစပ်အခေါင်းပေါက်နှင့်သွားကြားအကြားကွာဟမှုကိုသန့်ရှင်းအောင်ကူညီပါ. သွားကိုက်ခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးပါ. (မှန်ကန်သောနူးညံ့သောအကျင့်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ) အရက်မရှိဘူး,မနှိုးဆွ,အရသာအသစ်,နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်. အသုံးပြုနည်း: သင့်လျော်သောပမာဏကို 15 ယူပါ-20ml mouthwash,သင်၏နှုတ်၌ထားလော့,20 လောက်အဘို့အတံတွေးထွေး-စက္ကန့် ၃၀. သင့်လျော်သောနူးညံ့သောအကျင့်နှင့်အတူ,သွားကုထုံးကိုလျှော့ချပြီး periodontal ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်. စွမ်းရည်:300ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
MONIFACE HIGH OXYGEN ရေ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအစိုဓာတ်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအမြင့်ဆုံးအောက်စီဂျင်ဖြင့်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းမူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကအစိတ်အပိုင်း:သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေထိရောက်မှု:အရေပြားခြောက်သွေ့စေရန်/ရေကိုထိန်းသိမ်းထားပါ/အစိုဓာတ်/အသားအရေကိုစိုစွတ်စေ/အရေပြားဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်ဘေးကင်းရေး:ကြာရှည်ခံသည်,မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroidsထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:120ml